Dib u Eegista Waqtiga Dhagax dixeed: Inbadan oo lamid ah | Wararka IPhone
Dib u eegista Pebble Time: inbadan oo isku mid ah
Dhagax dixeed ayaa ku dhawaaqay sharadkiisa cusub ee sanadkaan: Waqtiga Dhagaxleyda. Shirkada cusub ee smartwatch-ka ee kacaawisay suuqa smartwatch waxay leedahay fikrado kaladuwan kadib soojeedinteeda, laakiin si kastaba ha noqotee waxay ahayd guul layaableh, iyadoo kor udhaaftay in kabadan $ 20 milyan oo doolar Kickstarter. Dhowr bilood ka dib, cutubyadii ugu horreeyay waxay durba gaareen warbaahinta, Verge-na wuxuu sameeyay dib-u-eegidoodii ugu horreysay. Aniga oo tixgelinayna taas Waxay si gaar ah muhiim ugu ahaayeen dib-u-eegista ay ku sameeyeen Apple Watch, waxaan aad u xiiseynayay waxa ay ka yiraahdeen Waqtiga Pebble, oo halkan waxaad ku haysataa fiidiyowga iyo faahfaahinta ugu muhiimsan.
Kadib laba jiil oo dhagax dixeed ah (asal iyo biro) waxaan filayay wax run ahaantii badali doona waxa inta hartay soosaarayaasha bixiyeen ilaa hada, laakiin wixii aan helay waxay ahayd saacad shaashad yar, qaraar yar iyo haa, midabbo, laakiin wax kale oo yar. Sida iska cad, sida fiidiyowgu iftiiminayo, aragtida qorraxda tooska ah ayaa wanaagsan, laakiin taasi miyey ka kooban tahay taas oo ku filan in la helo shaashad aan muuqanayn maalinta oo dhan? Ma aha in la xuso darbiga weyn ee ku hareeraysan shaashadda isla markaana yaraynaya dusha sare ee waxtarka u leh saacadda oo aan ka badnayn kala badh.
Verge wuxuu iftiiminayaa saacadda 'raqiis-raadinta, dhameystirka balaastigga, wax aan si buuxda ugu raacsanahay isticmaalka Pebble Original. Waxaan u maleynayaa in saacad tafaariiqeedu yahay $ 199 oo lagu daray kharashka dhoofinta ay tahay inay bixiso wax intaa ka sii badan, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo in biraha loo yaqaan 'Pebble Steel' ay isku qiimo yihiin isla markaana ay ku jiraan laba xarig, hal maqaar iyo hal bir. Uguyaraan isku xidhka lacag bixinta ayaa la dhigay wajiga hoose ee saacada, sidaasna ku qarinaya markaad xiraneyso. Isku xirka lacag bixinta waxaa loo isticmaali karaa waxa loogu yeero "smart Stps", kaas oo ku dari kara dareemayaal cusub Waqtiga Dhagax dixeedka, kaas oo aan xasuusano kaliya inuu leeyahay xawaare iyo mitir. Faahfaahin ku saabsan fadligeeda ayaa ah inay tahay la jaan qaadi kara suunka 22mm ee caadiga ah, wax ku dhacay Dhagax dixeedkii asalka ahaa laakiin nasiib daro kuma dhicin biibiilaha birta ah.
Sharadka Pebble ee saacaddan cusub sida iska cad laguma samayn qalab cusub, laakiin halkii laga sii deyn lahaa softiweerka cusub ee ay ku jirto. Waqtiga dhagax dixeed, sida magaca ka muuqata, waxay diiradda saari doontaa waqtiga, isdhexgalkeeduna wuxuu noqon doonaa sida «Timeline» (waqti go'an) oo aan ku arki karno macluumaad hore iyo kuwa dambe, oo lagu amro waqtiga ay dhaceen ama dhici doonaan. Ciyaaraha caawa la baahinayo, natiijooyinka galabnimadii dhacay, farriimaha aad heshay daqiiqado ka hor ... dhammaantood isla waqtigaas oo aad ku dhex mari doontid adoo adeegsanaya badhamada jireed ee dhinacyada, wax ka harsan noocyadii hore.
Batariga shaki la’aan waa barta adag ee uu ka kooban yahay Dhagax-dhagax. 'The Verge' waxay awood u yeesheen inay xaqiijiyaan sida ay u dhaqanto, iyo in kastoo Aad ayey uga fogtahay 7da maalmood ee sumadu caymiska, ay gaarto 4 maalmood Dhibaatooyin la'aan, jaantus aad uga sarreeya kan smartwatch kasta oo hadda la heli karo (marka laga reebo Pebbles-kii hore, dabcan), oo ay ku jiraan Apple Watch.
Waxaas oo dhan, dib u eegista The Verge waxay ku dhammaatay aragti aad u la mid ah tan aan haysto aniga oo aan wali isku dayin saacadda: «Waqtiga Dhagax-tuurku si fudud ayaa loo hagaajiyaa, laakiin ma aha wax cusub oo soo cusboonaaday. Laakiin hadaadan waligaa ka fikirin inaad iibsato Dhagax dixeed, ama smartwatches-ka aysan wali qancin, Waqtiga cusub ee Dhagax diyuhu ma badali doono maskaxdaada Waxaas oo dhan Verge waxay siinayaan isaga qoraal ah 6,8 (out of 10), oo aniga ila muuqatay macquul, ilaa aan ka hubiyo heerka darajada Apple Watch la siiyay: 7.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Dib u eegista Pebble Time: inbadan oo isku mid ah
Marka maqaalkani waa dib u eegis dib u eegis ah?
Ka jawaab qiimaha
Waa maqaal soo koobaya dib u eegis lagu sameeyay bog ku qoran af-ingiriisiga oo ka mid ahaa kuwa yar ee awood u yeeshay inay helaan Pebble Time ka hor qof kale.
Waxaa jira ku dayasho Shiineys ah oo ku saabsan saacadda tufaaxa oo leh shaqooyin iyo tayo badan. Haddii aysan tabtooda wax ka beddelin waxay u socdaan masiibo.
Dadku waa inay kafekeraan kahor intaanay weydiisan shaashad hd buuxa leh, shaashadaha taabashada iyo kumanaan waxyaalood oo kale. Maxaad rabtaa? Moobayl gacantaada ah ama saacad hawlo dheeri ah leh? Haddii jawaabtaadu tahay tan koowaad, waxaan kugula talinayaa inaad sugto 2 sano oo dheeri ah si aad u hesho wax hufan. Haddii kale, dhagxaanta waa mid ka mid ah kuwa yar ee aan isku deyin inay noqdaan mobayl yar oo ceeb ah.
PS: Halkan, iyo walaashaa haatan ee iPhone, haddii aysan tufaax ahayn (laakiin tufaaxu wuxuu leeyahay wax la mid ah), wax walba waa purria. Hayso qaddarin inaad adigu dib u eegis ku sameyso oo aan kani ahayn ... in ka badan maqaalku yahay beddel ...
Waxaad aragtaa inaad wax yar naga akhriday, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo aan Apple ahayn oo aad iyo aad u fiican. Oo ha ka shakin in haddii aan fursad u helno inaan dib u eegis ku sameyno Waqtiga Dhagaxleyda, waan sameyn doonnaa, sidii aan aniga qudhaydu ku sameeyay mid ka mid ah asal ahaan dhagax-dixeedka iyo birta birta ah ee 'Actualidad iPhone'.
Kani waa maqaal aan ku siineyno akhristayaasha boggeena fursad ay ku arkaan dib u eegista bogga sida Verge, oo ah degel aan qof walba aqoon u lahayn oo qof walba uusan ka turjumi karin Ingiriisiga.
Waxaan haystaa wakhti jiilaal waana ku faraxsanahay. ... inkasta oo wakhtiyadii ugu horreeyay ee baterigu i sii waday ilaa 4 maalmood (waxaan cusbooneysiiyay hor-u-socodka oo aan si isdaba-joog ah u horumarinayo ... Waxaan ku ciyaaray barnaamijyada la heli karo ... Xadhko ayaan cusbooneysiiyay maalintiiba mar ...) hadda mid Isticmaal caadi ah adigoon daminin waqti kasta. .. waxay igu socotaa 7 ilaa 9 maalmood dhib la'aan 🙂 Waan ogahay qof damiya habeenkii oo gaaro 12 maalmood. .. dhanka kale waxaan jecelahay inaan ku jawaabo waxa jira ama Gmail codkayga iyo saacaddayda. . Adigoon taleefanka kala soo bixin jeebkaaga ...
Jawaab Jorge Rionegro
Ceeb baa ah «dib u eegista» waxaan rajaynayaa inaad saxdo ama dib u eegto markaad gacantaada ku hayso wakhtiga Jiilaal! Ujeeddo yar, sidoo kale Apple Fanboy! Salaan! (Aniguna waxaan haystaa iPhone, laakiin dib-u-eegistaan ​​aan ujeedka laheyn waxay iila muuqataa khiyaano aniga) Dhagax dixeedku waa shey ka duwan kan Apple Watch iyo SW kale, waa qaab kale oo badeecad ah, isticmaal oo ii sheeg. Salaan!
Maaha dib-u-eegiddaydu, waa tan 'Verge's', laakiin waa ra'yigayga, oo waa tayda, marka ma beddelayo.
Nora Codsatay dijo
- Ka hor saacadda tufaaxa, Dhagax dixeedku wuxuu ahaa midka ugu fiican ee smartwatch la jaan qaada macruufka. Hadda waa ku dhowaad qashin. Waxaan ku qasbanaan laheyn inaan iska eegno.
- Qofkasta oo xiiseynaya dib u eegis waqtiga dhabta ah ee Pebble, wuxuu leeyahay mid Isbaanish ah oo Gizmodo ah, iyo mid kale oo Ingiriis ah oo ku yaal Verge (tixraac dhexdhexaad ah).
- Sidii ku jirtay Apple Watch, xilligii jiilaalku wax walba ma wanaagsana (oo wuxuu dhahaa qofka filaya Time Steel). Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu dhaliili karo.
- Waxaan la yaabay fiidiyowyada sida Waqtiga u fiicanyahay banaanka (shaashadda milicsiga) iyo sida xun ee ay ugu egtahay gudaha gudaha iftiinka hoose. Kaliya ka soo horjeedka Apple Watch.
Ku soo jawaab NoraApplelizada
Mophie Juice Pack dib u eegis kiiska Hawada ee iPhone 6
Sida loo Dhoofiyo Xiriirinta Google ee iPhone-kayga